Samaynta Burushka, Mashiinka-qodista & Qufulidda | Qalabka Burushka MeiXin
Mashiinka samaynta burush tayo sare leh oo iib ah halkan.
Xirfadlayaal MX200 qalooca burushka soo saaraha mashiinka.MX200 Mashiinka qalooca ee qalooca ayaa khibrad hodan u ah hawlgalka. Waxaan leenahay habka wax soo saarka caadiga ah iyo tikniyoolajiyadda wax soo saarka wanaagsan. Waxaan hubineynaa in badeecadaheena ay yihiin kuwo aamin ah, oo la isku halleyn karo oo tayo sare leh.Wax soo saarku wuxuu noqday diiradda warshadaha wuxuuna soo dhaweynayaa rajo codsi dhalaalaya. MX200 mashiinka qaadashada burushka qaloocaTijaabooyin kala duwan oo loogu talagalay MEIXIN ayaa la qaaday. Imtixaanadani waxay ku darayaan tijaabada halista tooska ah, tijaabinta fiilooyinka, tijaabinta korantada (EMC), iyo tijaabinta waxqabadka.
3 dhidibka Mashiinka Samaynta Burushka Xeegada Hal dhidibka ah
Waxaan kuu dooran doonnaa ama kuu habeyn doonnaa mashiinno burush oo kala duwan adiga oo raacaya noocyada wax soo saarkaaga. Waxaan soo saarnay guriga 2-5axis iyo burushka warshadaha iyo mashiinada xaaqin muddo 17 + sano ah.
Shiinaha 4 dhidibka Single Tufting Mashiinka-MEIXIN
Waxaan kuu dooran doonnaa ama kuu habeyn doonnaa mashiinno burush oo kala duwan adiga oo raacaya noocyada wax soo saarkaaga. Waxaan soo saarnay guriga 2-5axis iyo burushka warshadaha iyo mashiinada xaaqinka in kabadan 17 sano.MEIXIN China 4 dhidibka Single Tufting Mashiinka-MEIXIN
Shiinaha Big Disc mashiinka qaadashada mashiinka 5Axis-MEIXIN
Shiinaha Big mashiinka qaadashada burushka mashiinka 5Axis-soosaarayaasha-MEIXINMEIXIN waxaa lagu soo saaray nidaamka maareynta casriga ah.5Axis 1drilling 1 mashiinka tufting. Dhererka buuxinta 300mm.
Mashiinka Xirfad-yaqaannada Cilmiga Xirashada iyo soo-saareyaasha buraashka
Mashiinka Burushka Xirfadlaha ah iyo Soo-saare Burushka Burushka
Qalabka Musqulaha Qalabka Musqulaha ee MX210 ee ugu Wanaagsan FactoryPrice
Qalabka Musqulaha ee Qalabka Musqulaha ee MX210 ee ugu Wanaagsan FactoryPrice-. MX210 Qalabka Musqulaha Burushka Burushka ，，，，、、。 MEIXIN waxaa naqshadeeya nashqadeeyayaasha noocyadooda kala duwan. Ku haysashada fanku dusha sare ama dhinaca ayaa ah midka ugu badan maxaa yeelay noocaani wuxuu ka ilaaliyaa dhibco dhibco ah inay ku garaacaan waxyaabaha kuleylka ah. Mashiinka Qalabka Musqulaha ee MX210 Tayada waxaa dammaanad qaadi kara MEIXIN.
Soosaarayaasha Shiinaha ee MX211 Qalabka Broom Trimming Machine
Soosaaraha Mashiinka MX211 Buug gacmeed Mashiinnada Xajmiga Qumbaha-. MX211 Qalabka Broom Trimming Mashiinka MeIXIN ayaa si aad ah loogu soo saaray iyadoo la isku darayo labada farsamo ee sare iyo agab tayo sare leh. Naqshadeeyayaasha u shaqeeya JIANGMEN MEIXIN COMB BRUSH MACHINERY CO., LIMITED ayaa caan ka ah adduunka oo dhan. Mashiinka Xaashiyaha Qumanka ee MX211 Geedi socodka wax soo saarka ee MEIXIN wuxuu daboolayaa dhinacyo badan. Iyagu waa xaqiijinta fikradda, naqshada naqshada, sampling, qaabka goynta, tolidda, dhammaadka, maydhashada, iyo qiimeynta shaqada.
Mishiinka MX212 ee Wanaagsan ee Xajmi Leh Oo Bilaash ah iyo Qalabka Mashiinka Caloosha u Wanaagsan
Mishiinka MX212 ee Wanaagsan ee Xajmi Leh Oo Bilaash ah iyo Qalabka Mashiinka Caloosha u Wanaagsan. MX212 Mashiinka Birta Xajmiga Daran ee Mashiinka Mashiinka kulul lagu iibiyaa gudaha. Markay isticmaalayaashu dhammaystiraan qoritaankooda ama sawirkooda, sheygan wuxuu siiyaa marin u helka kombuyutarada Windows iyo Mac si loo badbaadiyo shaqadooda. MX212 Qalabka Xayawaanka ee loo yaqaan 'Broom Tumming' iyo Qalabka Mashiinka Udadka leh Shaqaalaha xirfad leh iyo qalab fara badan ayaa dammaanad qaadaya tayada wax soo saarka.
HighQuality WhMX 001 Mashiinka goynta goynta 'pneunatic Filament Cut Wholesale'
HighQuality WhMX 001 Mashiinka goynta goynta 'Pneunatic Filament Cut Wholesale'. WhMX 001 Mashiinka goynta Mashiinnada Qalabka Pneunatic Filament Qalabka wuxuu u shaqeynayaa aamusnaan aan laheyn dhawaaq qaylo-xanaaq leh iyo dhawaq yar kadib markii la isticmaalo muddo dheer, taasoo u oggolaaneysa dadka isticmaala inay joogaan jawiga deggan. Naqshadaynta $ $> waxay ka caawisay JIANGMEN MEIXIN COMB BRUSH MACHINERY CO., LIMITED guuleysiga suuqa. WhMX 001 Mashiinka goynta goynta Pneunatic ，，、、，，，。
Meixin Corporation Waqti
JIANGMEN MEIXIN COMB BRUSH KHATARTA XAQIIQADA KOOXAHA, Ilaa 2003, shirkadeena waxay inta badan soo saartaa guryaha 2-5axis iyo burushka warshadaha iyo mashiinada biraha, jarista iyo mashiinka calanka, mashiinka goynta mashiinka. Waxaa loo isticmaalay soo saar noocyo badan oo burush guryaha ah. Sida, burushka musqusha, barkadaha, burush hockey, buraashka timaha, burushka dhalada qaab kasta oo burush ah. Burushyada warshadaha sida: Burushka wax lagu qurxiyo, burushka diskiga ee wadada, iyo burush kale.
Meixin Burushka Sameynta Mashiinka
Waxaan soo saarnay noocyo kaladuwan oo ah burushyada guryaha iyo warshadaha iyo miraha, kuwa reerka ah oo ay ka mid yihiin burushyada musqusha, burushyada, burush-ka, cadayga, iyo burushyada dhalada, iyo kuwa warshadaha oo ay ku jiraan burushka roodhiga, burushka qashinka wadada iyo burushka qashinka wadada.
Xawaare sare 2 Mashiinka Qalabka Xirmooyinka
Waxaan kuu dooran doonnaa ama u astayn doonnaa mashiinno samaynta burush kala duwan adiga oo raacaya noocyada badeecadaada. Waxaan soo saarnay 2-5axis guryaha iyo burushka wershadaha iyo mashiinada biraha muddo 17+ sano ah.